China Cold sishaye umgwaqo umshini wokumaka umshini kanye nabaphakeli ACE IMISHINI
Umshini wokumaka umgwaqo obandayo
Umshini wokufafaza upende obandayo ophefumula ngesandla umshini wokumaka umfutho wokucindezela ongenawo umoya futhi ogelezayo. Lo mshini uqhutshwa yinjini ukuphusha ipompo yokucindezela ephezulu ukuze usebenze, bese uphusha upende wokufafaza ngengcindezi ephezulu. Umshini wonke unezinzuzo zesakhiwo esilula, ukugcinwa okulula nesisindo esincane. Kanye nezinhlobonhlobo zamamodeli wezibhamu ezingashadile nezimbili, abasebenzisi bangakhetha ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene.
Umshini wokumaka umgwaqo we-Hand push usetshenziselwa ukumakwa komgwaqo esikhumulweni sezindiza, indawo yokupaka, ifektri nenye indawo ebandayo enomsebenzi wokumaka olula, umsebenzi omncane, ukusebenza kahle kokumaka.
Umshini wokufafaza we-TW-CP Cold
Ubukhulu obungaphandle (L * W * H) 1250 mm X1000 mm X1200mm
Ingqikithi yesisindo somshini 240KG
Injini yamandla Injini ye-5.5HP ye-Honda
Ukumboza okufanelekile Ukupenda kokumaka okubandayo (i-acrylic acid)
Ukugeleza kwepende 10L / Min
Sishaye futha ingcindezi 8-12MPA
Ukuqhathanisa umbhobho Imilomo ye-Changjiang
Ububanzi bokumaka 50,80,100,120,150,200,230,250,300mm, njll. Umshini ulungele kakhulu ukumaka imivimbo ye-zebra engama-450mm.
Isibhamu sokufafaza Ingasetshenziswa ngasikhathi sinye noma ngokwehlukana
Ukumboza ubukhulu 1.2-4mm
Ibhokisi lobuhlalu be-Glass
Bamba eguquguqukayo shaft uhlelo
Ukusebenza kahle kwansuku zonke 3000m²
Ayikwazi ukuhlomisa ngomshayeli okhulayo, ukukhulisa ipuleti, isitulo esiqinisa？ I-Boosting Drive (enenjini)
Ukonga i-1.Energy nokuvikelwa kwemvelo: okonga izinto ezingama-30% uma kuqhathaniswa nokufafaza kwendabuko komoya, akukho-air-assist, akukho splash, nokuvikelwa kwemvelo
Ubuchwepheshe bokufafaza obungenawo umoya obushayela ipompo ephezulu enenjini kaphethiloli busetshenziselwa ukumaka enkundleni yezemidlalo, ukwakheka komugqa kucacile, kubushelelezi, kugcwele futhi kufane nokusebenza kahle okukhulu.
3 Umphumela onamandla: umphumela wokucindezela umfutho ophakeme, ukunamathela okuqinile, akukho engeli elifile ekwakhiweni, bushelelezi futhi bushelelezi ebusweni.
4.The umlomo wombhobho kulula ukuqaqa, futhi Imibhobho esemzimbeni ehlukene kungenziwa esikhundleni ukulawula ezahlukene umugqa ububanzi. Ingasetshenziswa njengesifutho esingenamoya sokumaka noma sokusayina.
5.Ukucindezela ngesandla, ujike ngokukhululeka, ukuma okuthembekile nokuqondisa okuguqukayo.
Isibhamu sokushiza esihlukile sobubanzi bomugqa ohlukile
Imodeli Imibhobho esemzimbeni
Ulayini ububanzi mm
Ukuphakama kwemibhobho mm （mayelana）
Qaphela: Ukuphakama kombhobho kuhlobene ne-viscosity yepende nengcindezi yepompo yesifutho.
1.Kuthiwani ngensizakalo yangemva kokuthengisa?
A: Sinesibopho sokuhlinzeka ngezeluleko zobuchwepheshe kuyo yonke impilo eshalofini yomshini. Sisiza ukuxazulula izinkinga nge-Whatsapp, Skype, ne-imeyili ngokuthumela izithombe namavidiyo.
3. Kuthiwani ngokuthunyelwa?
Langaphambilini Umshini wokumaka umgwaqo ozenzele wona
Olandelayo: Umshini wokumaka umgwaqo wonke
I-46inx2 Ride-on Concrete Power Trowel
I-ZID-UL-2000W High Frequency Concrete Vibrator
I-12000RPM isivinini sesikhonkolo sesikhonkolo esisheshayo
I-HCR90K-2 iTamping rammer